Orinasa an-tsokosoko anatomika China sy mpanamboatra | Shuangyang
Volavola manokana ho an'ny trauma sy fanarenana ny orbit, hamerenana ny endrika sy ny fiasan'ny maso mahazatra.
Fitaovana: titanium madio ara-pahasalamana
Endri-javatra & tombontsoa:
• araky ny anatomie an'ny gorodona orbital sy ny firafitry ny rindrina orbital famolavolana, hialana amin'ny laoniny ny lavaka optika sy ireo rafitra manan-danja hafa
• anatomy, volavola lobulated, araka izay azo atao mba hampihenana ny asa ny mamolavola, mamerina amin'ny laoniny ny fitohizan'ny taolana orbital, mitahiry ny ora fiasana, mampihena ny ratram-po amin'ny fandidiana, tsy dia miasa intsony fahasarotana.
• rindrina orbital ambany dia manify toy ny taratasy, noho izany, tazomy ny faritra mafy ao aorianan'ny harato titanium gorodona orbital. Ampio hamerina ny hodi-maso sy ny tavy amin'ny eyeball voafonja, hamerina amin'ny laoniny ny habetsaky ny lavaka orbital ary ny fihetsiky ny maso, hanatsara ny fidinan'ny maso sy ny diplopia.
screw1.5mm visy fandavahana tena
mpamily volo loha: SW0.5 * 2.8 * 75 / 95mm
Amin'ny anatomie, ny fihodinana dia ny lavaka na ny faladian'ny karandohany misy ny maso sy ny tohiny. Ny "Orbit" dia afaka manondro ilay tadin'ny taolana. Ny habetsaky ny orbit amin'ny olon-dehibe dia 30 milimetatra, ny maso dia mitentina 6,5 ​​ml total. Ny votoatin'ny orbital dia misy ny maso, ny fascia orbital ary retrobulbar, ny hozatra extraocular, ny nerveau cranial, ny lalan-dra, ny tavy, ny fihary lacrimal miaraka amin'ny sac sy ny fantsony, ny hodi-maso, ny ligam-baravarana palpebral eo anelanelany sy ny sisiny, ny ligamenta, ny ligamenta mihidy, septum , ganglion ciliary ary hozatra fohy amin'ny ciliary.
Ny boriborintany dia endrika conical na lava vava piramida misy lafiny efatra, misokatra ho midline tarehy ary manondro any an-doha. Toerana iray, tampony ary rindrina efatra no mandrafitra ny boriborintany tsirairay.
Ny rindrin'ny taolana orbital canal amin'ny olombelona dia mozika misy rafitra hafakely fito misy embryolojika, misy ny taolana zygomatika any aoriana, ny taolana sphenoid, miaraka amin'ny elany kely kokoa mamorona ny lakandranon'ireo optika ary ny elany lehibe kokoa mamorona ny faritra aoriana ao amin'ny fizarana orbital taolana. , ny taolana mavesatra ambany sy ambany izay, miaraka amin'ny taolana lacrimal sy etmoid, dia mamorona rindrina medialan'ny lakandrano orbital. Ny sela etmoida dia manify tokoa, ary mamorona rafitra fantatra amin'ny anarana hoe lamina papyracea, ny taolam-paty malemilemy indrindra ao amin'ny karan-doha, ary iray amin'ireo taolana tapaka matetika amin'ny trauma orbital.
Ny rindrina eo anoloana dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny zygomatika ary aoriana kokoa amin'ny takelaka orbital an'ny elatra sphenoid lehibe kokoa. Mihaona amin'ny taolana zygomaticosphenoid ny taolana. Ny rindrina eo anoloana dia rindrin'ny matevina indrindra, io no faritra miharihary indrindra, ka mora kokoa ny sendra tena marefo noho ny trauma mahery vaika.
Ny vaky rindrin'ny orbital ambany dia ny vaky matetika amin'ny vaky orbital blowout, izay matetika miteraka fahasarotana toy ny invagination enophthalmic, fikorontanan'ny fihetsiketsehana okular, diplopia ary ny famindra okular, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny asa sy ny bika aman'endriny. Ho an'ny valan-tsofina orbital, ny fandidiana dia tokony hatao faran'izay haingana indrindra raha mihoatra ny 2mm ny fidiran'ny intraocular ary lehibe kokoa ny faritra tapaka raha ny nohamarinin'ny CT. Amin'ny fanamboarana ny vaky orbital, ny fitaovana artifisialy ampiasaina matetika dia misy taolana artifisialy hydroxyapatite, porosika polyethylene polyous porous, synthetic hydroxyapatite ary fitaovana vy titanium. Ho an'ny safidy fananganana famerenana orbital, ny fitaovana implant ideal dia tokony hanana ireto toetra manaraka ireto: mifanentana tsara biolojika, mora miendrika ary apetraka amin'ny faritra misy lesoka amin'ny rindrina orbit, afaka mitazona ny endriny manohana ny votoatiny orbital mba hitazomana ny toeran'ny maso ara-dalàna, dia afaka manolo ny tsy fahampian'ny atiny orbital ary mampitombo ny haben'ny lavaka orbital, fanamafisana ny habetsahan'ny CT hanamora ny fandinihana aorian'ny fandidiana. Koa satria ny volon'ny titanium dia mora miendrika ary manana fixation tsara, dia tsy misy fanentanam-po, carcinogenesis ary teratogenicity amin'ny fifandraisany amin'ny vatan'olombelona, ​​ary azo ampiarahina tsara amin'ny taolana, epithelium ary sela mifamatotra, ka io no fitaovana metaly tsara indrindra miaraka amin'ny biocompatibility .
Ireo takelaka orbital preformed dia natao avy amin'ny angona CT scan. Ireo takelaka ireo dia misy implants izay manakaiky ny anatomy topografian'ny gorodona orbital olombelona sy ny rindrin'ny medial ary natao hampiasaina amin'ny trauma craniomaxillofacial mifantina. Endrika telo-habe mialoha: Natao ho an'ny famolahana sy fanapahana kely indrindra izay mampihena ny fotoana ilaina amin'ny takelaka contour. Sisin-takelaka misy volo: ho an'ny fampidirana takelaka mora amin'ny alàlan'ny fanodinana hoditra ary tsy fanelingelenana kely eo anelanelan'ny takelaka sy ny tavy malefaka manodidina. Volavola misitery: Mba ampanjifaina ny haben'ny takelaka hiresahana ny topografia orbital ary hitazonana ny sisin'ny takelaka misy contoured miaraka amin'ny sisiny maranitra kely. Faritra henjana ： Mamerina ny endrika amin'ny gorodona orbital aoriana mba hitazomana ny toerana misy ny tany. vahaolana feno momba ny fanamboarana sy fanarenana ny gorodona orbital.
Teo aloha: 2.0 visy fandavahana tena
Manaraka: lozam-pifamoivoizana maxillofacial micro X plate
fanidiana lovia kely arc maxillofacial
takelaka genioplasty 0.8 orthognathic
fanidiana lovia kely 90 ° L maxillofacial
lozam-pifamoivoizana mikraoba maxillofacial plate plate
endrika rahona-3D titanium mesh anatomy
trauma maxillofacial lovia kely 90 ° L